Hungry Dragon dia arcade lehibe iray izay anehoan'i Ubisoft ny kanto rehetra | Androidsis
Ny Dragon Hungry lehibe izao dia misy amin'ny Android: lasa dragona tena matavy be
Avy amin'ireo mpamorona an'i Hungry Shark no ivoahan'ny Dragon noana, arcade lehibe manova anao ho dragona fa tena maniry ny hametraka zavatra ao am-bavanao ianao. Lalao mahafinaritra natao tamim-pahombiazana tamin'ny fahatanterahana ara-teknika hisalasalana ireo namanay amin'ilay finday avo lenta amin'ny fitaovana azontsika; ahoana ny Poco F1.
Naga mihinana manampy kalitao betsaka amin'ny ambaratonga rehetra hanaitra anay amin'ny fahitana amin'ny dragona sy fiaviana noforonina tsara sy karazana endri-tsoratra. Tontolo iainana tena mazava miaraka amin'ny vokany lalina mahomby izay manome ny fahatsapana fa tena manidina miaraka amin'ilay dragona malalantsika na aiza na aiza isika.
1 Kalitao amin'ny haben'ny
2 Dragona matanjaka be dragona sy ny biby fiompy
3 Tontolo feno pitsopitsony
Kalitao amin'ny haben'ny
Ity lalao vaovao navoakan'ny Ubisoft ao amin'ny Google Play Store ity manana ny zava-drehetra ho lasa iray amin'ireo tsara indrindra ny taona. Ankoatry ny efa voalaza momba ny fahatanterahana ara-teknika sy ny fisian'ny fahitana tena manaitra amin'ny lafiny tsirairay dia manana atiny ampy ihany koa izy mba hanitarana ny fiainany milalao mandritra ny herinandro maro.
Izany hoe hanana ianao dragona isan-karazany lehibe amin'ny habe rehetra ary ny hatsaram-panahy hanokatra, ary koa andiana biby fiompy sy hoditra izay hametraka ny fikosoham-bolo amin'ny lalao folo. Izany rehetra izany dia mitarika antsika hitantana dragona be hatendan-kanina izay tsy hitsahatra amin'ny fihinanana ny zava-manan'aina rehetra tonga aminy.
Saika tsy manam-petra io hanoanana io, ary hahafahanao mampiasa fahaizana sarobidy hafa toa mandrora afo na mivadika dragona goavambe raha haintsika ny manangona, amin'ny lalao iray, ny litera rehetra amin'ny teny hoe "noana".
Dragona matanjaka be dragona sy ny biby fiompy
Ny fisongadinana iray hafa amin'ity lalao Ubisoft vaovao ity dia ireo biby fiompy ao aminy. Ireo dia hahafahantsika manampy endri-javatra fanampiny, ankoatr'izay ho namanay mandritra ny diantsika. Izany hoe, afaka manana unicorn ianao izay mandefa ody na dragona kely izay hanampy fanampiny fanoherana.
Ilaina tokoa ireo biby fiompy ireo afaka mamaky tontolo iray izay hahitantsika amin'ireo dragona lehibe kokoa noho ny fikasana hanome sakafo amin'ny volanay, ireo goavambe goavambe izay handatsaka kapoka mafy na karazana fandrika sy fahavalo saika tsy manam-petra izay ho mpiara-dia aminay indrindra hanangonana sakafo sy vola.
Hanampy antsika izany vola izany ambaratonga ary mandehana mamoha dragona lehibe kokoa, endrika tsara kokoa sy hoditra izay manome azy io ho an'ny lalao iray izay mikendry tsara ny lafiny rehetra.
Tontolo feno pitsopitsony
Tena manaitra izany ny faritra tsirairay dia samy manana ny antsipiriany. Avy amin'ny vohitra elf ka hatramin'ny an'ny olombelona izay manandrana manafoana antsika amin'ny tsipìkany sy ny zana-tsipìkany. Na ilay tontolo ambonin'ny rahona izay ahitantsika zavaboary maro kokoa izay hivoaka hitsena antsika hohanina na hanandrana hanimba ny fety.
Dragon Hungry ara-teknika dia lalao lehibe izay manararaotra indrindra ny fitaovana finday, mba hahafinaritra anao ireo tontolo iainana ireo, sary mihetsika tena tsara notanterahina, karazana vokatry ny famosaviana sy ny fipoahana na ny famolavolana ny endri-tsoratra izay mitarika antsika amin'ny karazan-dragona rehetra ary koa ireo rehetra manenika an'ity tontolo ity mahafinaritra.
El mifehy ihany koa intuitive ary afaka segondra vitsy dia ho vitantsika ny hiatrika ilay dragona tadiavintsika. Ianareo izay nanandrana ny Hungry Shark dia hahatsapa ho ao an-trano amin'ny lalao lavorary ho an'ireo izay mitady ilay dragona an'ny renin'ny dragona avy amin'ny Game of Thrones.
Ubisoft dia nahalala ny fomba filalaovana tsara ny karatra rehetra hitondrany antsika Dragon Hungry mahafinaritra izay tsy maintsy hitondranao dragona maharikivy hahafahana mampihorohoro ny tany mahafinaritra sy medieval. Iray amin'ireo lalao ireo izay manampy teboka hitondrana ny filalaovana finday any amin'ny toeran-kafa ary asehontsika amin'izany fa amin'ny alàlan'ny finday tsara dia azontsika atao ny mamita tsara.
Fampielezana teknika tsara amin'ny ambaratonga rehetra
Ny famolavolana dragona
Mahatalanjona ny tontolo iainana sy ny mponina ao aminy
Manomàna finday tsara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny Dragon Hungry lehibe izao dia misy amin'ny Android: lasa dragona tena matavy be